Igbo Mass Readings for Wednesday 7th Week of Easter | Catholic Lectionary
WEDNESDAY: IZU UKA NKE ASAA N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.
Ihe Ogugu nke mbu – 20:28-38
Pol gwara ndi okenye nzuko Kristi no na Efesus si: Kpachapurunu onwe unu anya. Kpachapukwaranu igwe aturu ahu niile anya, nke Mmuo Nso mere unu ndi nlekota ha. Na-azunu nzuko nke Chineke, nke Onyenweanyi ji obara ya gbata. Ama m na mgbe m lachaara, ajo anuahu ga-abata n’etiti unu nke agaghi emere igwe aturu ebere. Ufodu mmadu n’etiti unu ga-ebilikwa were okwu ugha duhie ndi kwere na Kristi uzo, ka ha sobe ha.
Ya bu na-echenu nche. Chetakwa etu m si were anya mmiri, abali na ehihie n’ewepughi aka, ihe ha ka afo ato, na-adu mmadu niile odu n’otu n’otu. Ugbu a, ana m ewere unu nye n’aka nchedo Chineke ma n’odudu nke okwu nke amara ya, nke nwere ike iwulite unu elu, nke nwere ike ime ka unu keta ngozi ukwu ahụ nke Chineke kwadobere ndi ya niile edoro nso. O dighi onye obula n’ime unu m jiri anya ukwu nara olaocha ya, ma o bu olaedo ya, ma o bu uwe ya. Unu onwe unu ma na ejiri m aka m abuo ruputa ihe di mu onwe m na ndi mu na ha no mkpa. N’ihe niile, egosiri m unu onwe m na anyi aghaghi inyere ndi adighi ike aka site n’iru oru n’uzo di otu a, na-echeta okwu nke Onyenweanyi Jesu kwuru si: “O di ngozi inye enye karia inara anara,” mgbe o kwuchara ihe ndi a ya na ha niile gburu ikpere n’ala, kpee ekpere. Ha niile bere akwa makuo Pol, susukwa ya onu. Ihe wutere ha karia bu okwu Pol gwara ha, na ha agaghi ahukwa ya ozo. Ha jisiri ike dupu ya, ruo mgbe ọ banyere n’ugbo mmiri.
ABUOMA NA AZIZA – Ps: 68:29-30,33-35, 35-36.
Aziza: Buoronu Chineke abu, unu alaeze nke uwa.
Nara mgbucha Chineke, dika o si kwesi ike gi, ike ahu, Chineke, I jirila meere anyi otutu ihe site n’ulo nso gi di elu karia Jerusalem! Ndi eze ga-abiakwute gi, na-eweta onyinye ha. Az./
2 Buoronu Chineke abu, unu alaeze nke uwa, kuoronu Onyenweanyi egwu, onye na-agba inyinya n’eluigwe, eluigwe mgbe ochie, Geenu ya nti ka o na-eti mkpu, ka o na-agba egbe igwe. Ma kwuputakwa ike Chineke. Az./
Ebube ya di n’elu Izrel, ike ya di n’urukpu, Chineke kwesiri ituru nnukwu egwu n’ebe ya di nso: Chineke nke Izrel, na-enye ndi nke ya ike. Ngozi diri Chineke. Az./
Aga m ezitere unu mmuo nke eziokwu, o ga eduba unu na eziokwu niile.
OZIOMA – 17: 11-19.
Jesu leliri anya n’eluigwe were kpee ekpere si: “Ugbu a, anoghikwa m n’ime uwa, ha ka no n’ime uwa, ma ana m alaghachikwute gi. Ya bu, Nna di nso, dokwaa ha nke oma site n’ike nke aha gi, bu aha ahu nke i nyere m, ka ha buru otu dika anyi onwe anyi si buru otu. Mgbe mu na ha no, edobere m ha nke oma site n’ike nke aha gi, bu nke i nyere m. Echekwabara m ha, o dighikwa onye obula n’ime ha lara n’iyi ma o bughi nwa nke ila n’iyi ahu. Ma nke a mere ka ewee mezuo ihe edere n’Akwukwo Nso. Ugbu a, ana m alaghachikwute gi. Ana m ekwu ihe ndi a otu a m ka no n’ime uwa, ka ha wee nwee onu n’uju n’ime ha. Agwara m ha okwu gi, uwa wee kpoo ha asi, n’ihi na ha abughi ndi nke uwa dika mu onwe m na-abughi onye nke uwa. Ekpere m abughi ka i wepu ha n’uwa, kama ka i chekwaba ha ka ha ghara ibanye na njo. Ha abughi ndi nke uwa, dika mu onwe m na-abughi onye nke uwa. Were eziokwu gi doo ha nso, n’ihi na okwu gi bu eziokwu. Ezigala m ha n’uwa dika i si ziga m n’uwa. N’ihi ha, edoola m onwe m nso, ka e wee doo ha nso n’eziokwu.